ဒီ ထက် ကြမ်း အုံး မ လို့ လား ရှင် – Hlataw.com
ဒို့အရေး ဒို့အရေး” ဆိုတဲ့ အသံတွေ စက်ရုံအပြင်မှာ ဆူညံနေသည် စက်ရုံမှ ဝန်ထမ်း အများစုရဲ့ တောင်းဆိုမူ များနဲ့ ဟစ်အော်နေကြခြင်းဖြစ်သည် ဒီအချိန်မှာ စက်ရုံတွင်းမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ဝန်ထမ်းအနဲစု ကတော့ အလုပ်တွေမလုပ်ဖြစ်တော့၍ စက်ရုံဆင်းချိန်ကိုသာ ထိုင်စောင့်နေကြရသည် ကျနော်တယောက်ကတော့ ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့အလုပ်များနေတယ်လေ အကြောင်းကတော့ စက်လိုင်းဘက်မှ အသက်၂၃နှစ်အရွယ် တစ်ခုလပ်မလေး အေးမမကို ဖွန်ကြောင်နေတာပင် မက်ဆေဂျာ မှာ အပြန်အလှန်စာပို့နေတာ ခရီးအတော်ရောက်နေပါပြီ စက်ရုံတစ်ခုထဲမှာ နှစ်နဲချီပြီး ခင်မင်နေကြသူတွေမှိ့ လိုရင်းကို ခပ်မြန်မြန်ပင်ရောက်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့.
ကိုကြီးကလည်း မလွန်ဘူးလား ဒီနေ့မှ တွဲကြမယ်ပြောပြီး ခုညနေတွေ့ကြရအောင်ဆိုတော့”ဟာအချိန်တွေအများကြီးပေးနေစရာလိုလို့လား အေးလည်းလိုချင်နေတာ ကိုသိတယ် ကိုလည်းလိုချင်နေတာပဲလေ အာ့တော့ ခုညနေအလုပ်ဆင်းတာနဲ့. တွေ့ကြရအောင်ပါ ကို စက်ရုံညာဘက်ဒေါက့်မှာ ဆောင့်နေမယ်နော်” ဒီနေ့တော့မရလို့ပါ စက်ရုံအခြေနေကို အိမ်ကလည်းသိနေတော့ အိမ်ပြနိနောက်ကျရင် လူကြီးတွေ စိတ်ပူနေကြမှာ နောက်ရက်မှ တွေ့ကြရအောင်နော်ကို” ပြီးရောကွာ ဒါပေမဲ့ခု ကို အေးနဲ့ စာပို့နေရင်း ကိုအောက့်ကကောင်က အရမ်းမာနေပြီ မနေနိုင်တော့ဘူး အေးကိုကိုယ် ဗီဒရိုကော နဲ့ အေးဟာကိုပြပေးပါလား ကိုလက်နဲ့လုပ်ပြစ်ချင်လို့.” အာ့လိုမျိုး ကျနော်တောင်းဆိုတော့ သူတော်တော်နဲ့မလိုက်ရောဘူးဗျ
အချိန်တော်ကြာအောင် စာနဲ့နှူးမှ ချစ်လို့နော်ဆိုပြီး သန်ဇင်ခန်းရှိရာသို့ သူရော ကျနော်ပါ ချီတတ်ခဲ့ပါတော့တယ် အေးမမဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက အတော်နှာကြီးတယ်ဆိုတာ ကျနော်သိနေတာပဲလေ ဒါကြောင့်လည်း ခုလိုလွယ်လွယ်နဲ့ရတာပေါ့ လင်နဲ့ကွဲပီးထဲက ထားလိုက်တဲ့ရည်းစားဆိုတာလည်း မနည်းဘူး ရုပ်လေးချောသလောက် လီးလည်းအတော်ကြိုက်တဲ့အမျိုးသမီး သူလင်နဲ့အတူရှိနေတဲ့ အချိန်တွေမှာတောင် နောက်မီးလင်းခဲ့တဲ့သူပါ အကျင့်မကောင်းမှန်းသိပေမယ့် ရုပ်ကတော့ မြင်တဲ့ကောင် လီးတောင်စေတဲ့ရုပ်မျိုးဗျ အရပ်၅ပေသာသာလေးနဲ့ ခြေသလုံးကြီးကြီး ပေါင်ကြီးကြီး ခါးသေးတင်ကား နိုတွေကလည်း ရှယ်ကြီးတွေနဲ့ အသားကလည်းအတော်ကိုဖြူတာ….ဒီလိုနဲ့ သူလည်း အမျိုးသမီးသန့်ဇင်ခန်းထဲ ရောက်ပြီဖြစ်သလို ကျနော်လည်း အမျိုးသားအိမ်သာခန်းကျင်းလေးထဲမှာ ဖုန်းကိုနေရာချရင်း ဗီဒရိုကော ခေါ်လိုက်ပါတော့တယ် အစပိုင်းတော့ တော်တော်နဲ့ သူဟာကိုလှန်မပြခဲ့ပေမယ့် ကျနော်ညီတော်မောင်ကို ထုပြရင်း သူကိုလည်း မရှက်ဖို့ ပြပေးဖို့ အတန်တန်ပြောတော့ သူလည်း ပိပိလေးကိုပြလာပါတော့တယ်
ထိုမှတဆင့်တတ်ရင်း သူလည်းစိတ်ပါလာပြီး သူပိပိထဲ လက်၂ချောင်းထိုးထည့်အဆက်မပြတ် တဆက်ဆက်အဝင်ထွက်မြန်မြန်လုပ်ပြရင် ပါးစပ်ကလည်း တအင်းအင်းမြည်တမ်းရင်း စောက်ရည်များထွက်သွားရသလို ကျနော်လည်း အရည်များပန်းထုပ်လိုက်ရတော့သည်…..
ဆောင်းရာသီရဲ့ မနက်ခင်း နှင်းဖြူလေးများက ကသူကလူအလှဆင်လျှက် အေးချမ်းနေပါတယ် အလုပ်ဗန်းပြပြီး မိုတယ်အခန်းထဲရောက်နေတာကတော့ ကျနော်နဲ့ အေးမမပါ သူမကိုယ်ပေါ်မှာလည်း အဝတ်မဲ့နေသလို ကျနော်လည်းမိမွေးတိုင်ပါပဲ တယောက်နဲ့တယောက် ကျစ်နေအောင်ဖက်တွယ် နမ်းစုပ်ကြရင်း အဝင်ထွက်မှန်မှန်စည်းချက်တွေနဲ့အတူ ကာမအရသာကို နှစ်ယောက်သား ခံစားရင်း အိပ်ယာပေါ်၌သူအပေါ်ရောက်လိုက် ကိုယ်အပေါ်ရောက်လိုက်ပေါ့ ကို သဲညောင်းလာပြီ ကိုယ်အပေါ်ပြန်တတ်အုံးကွာ”အေးမမရဲ့ အခေါ်ပြောတွေကစ ပြောင်းလဲလို့ ရမ္မတ်ပြည့်နေတဲ့ မျက်နှာနဲ့ ကျနော်ကိုကြည့်ရင်းပြောသည် ကျနော်လည်း ပြီးချင်လာပြီဖြစ်လို့ နေရာပြောင်းလ်ုရ်တယ် သူမပေါင်တန်အကိတ်ကြီးများကို ဖြဲကားပြီး ခပ်ပြင်းပြင်း အချက်၃၀လောက် ဆောင့်လိုးချရင်း လရည်များပန်းထည့်လိုက်တော့တယ် အေးမမကတော့ ကျနော် တင်ပါးကိုအတင်း ဆွဲဖိကပ်ထားရင်း သဲလည်းပြီးလိုက်တယ်လို့ ပြောပါတယ်..
ခဏနားရင်း နှစ်ယောက်တူရေချိုးကြပြန်တယ် ရေချိုးရင်းး သူမက ကျနော်ကို မှုတ်ပေးလာပြန်ပါတယ် အေးမမသည်အတော်ထန်တဲ့ ငထန်မတယောက်ဆိုတာ အစထဲကသိထားတာမှိ့ သူမအကြိုက်မိုက်ပြနိုင်အောင် ဆေးများသောက်ထားခြင်းကြောင့်သာတော်တော့တယ် ကျနော်လီးကို အားရများရစုပ်တာ တအင်းတအင်းနဲ့ နောက်ဆုံး ကျနော်သူမပါးစပ်ထဲမှာပဲ ပြီးပစ်လိုက်တယ် ဒါကိုသူကစိတ်မဆိုးမဲ့အပြင် လရည်တွေပါသောက်ပြလိုက်သေးတယ် သူကျနော်ကို စုပ်ပေးပြီးတော့ ကိုသဲကိုယ်လည်းလုပ်ပေးနော်ဆိုလို့ ကျနော်လည်း သူပြင်ပြစုပေးလိုက်ရသေး ဒါမယ့်ကြာကြာမခံလိုက်ပါဘူး သူပြီးသွားလို့ တော်ပြီ ကိုတဲ့လေ…… နေ့လည်ပိုင်းတော့ နှစ်လုံးအိပ်လိုက်ကြသေးတယ်
၂နာရီခွဲလောက်ပြန်နိုးတော့ သူကပဲ စပြီး ကျနော်နှုပ်ခမ်းတွေကစ်စပေးလာပြန်ပါရော အိပ်ထားလိုက်တာမှိ့ အောက်ကညီတော်မောင်ကလည်း အဆင်သင့်အနေထားရောက်လာပြန်ပါတယ် ဒီတကြိမ်တော့ ငထန်မကိုအပြတ်လိုးပြစ်ဖို့ ကျနော်တွေးလိုက်တယ် ဒီတိုင်းရိုးရိုးလုပ်ရင်လည်း သူအတွက်က တချားယောကျာ်းတွေနဲ့ ခံရသလိုပဲဖြစ်နေမှာပဲလေ ဒါကြောင့် ခဏလို့ပြောပြီး အိမ်သာထဲကျနော်ဝင်လိုက်တယ် နေ့လည်စာ စားတုန်းကခေါက်ဆွဲကြော်ဗူးကို ပတ်ပေးလိုက်တဲ့ သားရည်ပင်၎ပင်က်ုပူးပြီး တြိဂံပုံ ဒေါင့်သုံးဒေါင့်မှာ အဖုလေးတွေဖြစ်အောင်ချီလိုက်ပြီး ကျနော်လီးရဲ့ ဒစ်ရင်းကိုဆွတ်လိုက်တယ် ဂေါ်လီအဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ သေချာတပ်ပြီးမှ အပြင်ပြန်ထွက်လာပြီး ငထန်မလေးကို ဖင်ကုန်းပေးခိုင်းပြီး အရည်ရွဲနေပြီဖြစ်တဲ့ သူမစောက်ပတ်ဝလီးတေပြီး အဆုံးထိဆောင့်လိုးချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့…
အားးးး ကို အမလေးးးးးးအားးး ကျိမ်းပြီး အီစိမ့်သွားတာပဲ အားလားး” ကောင်းလား”အင်းကောင်းတယ် နာလည်းနာတယ် တအားမလုပ်နဲ့အုံးနော် ဘာကြီးထည့်လိုက်တာ” အာ့တေမေးမနေနဲ့” စကားဖြတ်ပြီး ဝင်ပြီးသားလီးကိုပြန်ဆွဲထုတ်တော့ မနဲဆွဲရတယ် သားရည်ဖုတွေက စောက်ပတ်နံရံတွေနဲ့ ထစ်ထစ်နေတာကြောင့်ပါ သူမဖင်ကြီးကပါ လီးနောက်ကပ်ပါလာရင်း အား နာလိုက်တာကိုရယ် ဖြေးဖြေးလုပ်ပါအုံးဆို အဟင့်” သူမဖင်သားတွေကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆွဲဖြစ်ထိမ်းထားလိုက်ပြီး ကျနော် အချက်၂၀လောက် သူဘယ်လောက်အော်အော် နားမထောင်ပဲ အဆက်မပြတ်ပဲ အားပါပါ ဆွဲထုတ်ဆောင့်လိုးလုပ်ပြစ်လိုက်တယ်….
ကို သဲကိုအသေသတ်နေတာလား အား အား ငထန်မလေး ခုတော့အသားတွေ တဆက်ဆက်တုန်နေရပြီ မနားတန်းလိုးလိုက် တချက်ချင်းမှန်မှန် ဆောင့်လိုက် စောက်ပတ်နှုပ်ခမ်းသားများလိမ်လိမ်ပါလာတာကို မြင်ရတာမှိ့ ကျနော် ကျေနပ်နေမိသလို လိုးရတာလည်းပိုအားရပါတယ် စောက်ရည်တွေထဲမှာ သွေးစလေးများပင်ပါလာပါတယ် ငထန်မလေးကတော့ နာနေတဲ့ကြားကပဲ တချီပြီး တချီ ပြီးပြီသွားပြန်ပါတယ်.. ကိုရယ် သဲသေတော့မှာပဲ ပြီးလိုက်တော့ကွာ´´အားအား သူမကို ပက်လက်လှန်လိုက်ပြီး ကတင်ဇောင်းထိသူ ဖင်ကြီးကိုဆွဲယူလိုက်တော့ ပျော့ပျော့နွဲ့နွဲ့လေးပါလာပါတယ်
ကျနော်ကတင်အောက်ဆင်းပြီး သူမခြေသလုံးများကိုချဲကားရင်း မိုးပေါင်ဆွဲမြှောင်လိုက်ပြီး ပြဲပြဲလန်ပြီး ဖောင်းရောင်နေတဲ့ စဖုတ်ကြီးထဲ လီးပြစ်သွန်းလိုက်တော့ အား အဟင့် ဖြေးဖြေးလုပ်ပါဆို သူမမျက်နှာလေးက မဲရွဲရွဲလေးပေါ့ ကိုပြီးချင်ပြီကွာ ခဏအောင့်ခံပေးနော်” ဟာဒီထက်ကြမ်းအုံးမလို့လား” ခဏလေးပါကွာ”ပြောရင်းပြီး ပြီးချင်နေတဲ့စိတ်ကိုလွတ်ပြီး ခြေသလုံးတွေကို ရင်ဘက်နဲ့ဖိပြီး ငရုပ်ထောင်း ထောင်းချလိုက်တော့သည်..အောင့်သွားတာပဲကိုရယ် အားးဖြေးဖြေး အမလေးနာလိုက်တာ အားအားထွက်ကုန်ပြန်ပြီ အဟင့်ခနလေးကို သဲပြီးပြန်ပြီ..စသဖြစ် စသဖြင့်ပေါ့…..